#Wasiirka caafimaadka Tuniisiya ayaa is casilay kaddib markii kow iyo toban carruur ah ay dhinteen 24 saacadood - Get Latest News From Horn of Africa
#Wasiirka caafimaadka Tuniisiya ayaa is casilay kaddib markii kow iyo toban carruur ah ay dhinteen 24 saacadood
By axadle	 On Mar 10, 2019 Last updated Mar 31, 2019
Wasiirka Caafimaadka Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif ayaa is casilay sabtidii. Sababta ayaa ah in kow iyo toban carruur ah ay si lama filaan ah ugu dhinteen 24 saacadood gudahood isbitaalka gobolka ee ku yaala caasimada Tunis.
Dhimashadu waxay dhaceen khamiista ilaa jimcaha.
Wasaaradda Caafimaadka iyo xeer-ilaaliyeyaasha dawlad-goboleedku waxay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhimashada.
Baaritaano horu dhac ah oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in caruurtaasi isbitaalka ku dhalatay ay u dhinteen caabuq ka dhashay oksijiin la’aan mudadii u dhexeysay todobada ilaa sideedda bishan Maarso.
Wasiirkii caafimaadka dalka Tunisia, Cabdirauf Sharif oo afar bil un xilkan hayay ayaa isku casilay fadeexada ka dhalatay geerida caruurta yar yar ku timid, waxa uuna sheegay wasiirka in uu aad uga naxay geerida caruurta iyo daryeel la’aanta lasoo daristay.
Ra’iisal wasaaraha dalkaasi Yuusuf Shahiid ayaa shaaca ka qaaday in la bilaabay baaritaano lagu sameenayo isbitaalka dowladu maamusho ay caruurta ku geeriyoodeen, waxa uuna xusay in si gaar ah loo baarayo habka faayo dhowrka isbitaalka iyo farmashiga.
Daryeelka caafimaad ee Dalka Tunisiya ayaa loo tixgeliyey kuwa ugu wanaagsan Waqooyiga Afrika. Laakiin ka dib markii isbedelka awoodda ee yimid sanadkii 2011, nidaamku wuxuu la tacaalaya oo uu la halgamay maamul xumo iyo dhaqaale xumo.
Dadka dhaleeceeya xukuumadda ayaa ku doodaya in qaybta dawladdu ay tahay mid aad u xun.
Dalalka caalamka ayaa inta badan qaladaadka iyo waxyaabaha kale ee dhaca waxaa lagu ciqaabaa madaxda xilalka haysa, halka Soomaaliya aysan ka jirin isla xisaabtan ayna xilalka sii hayaa masuuliyiinta musiibo kasta oo dhacda.